Xaalka Mareykanka ee COVID-19 oo sii xumaanaya (Warbixin) | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Xaalka Mareykanka ee COVID-19 oo sii xumaanaya (Warbixin)
Xaalada Mareykanka ee cudurka Covid 19 ayaa sii xumaanaya, islamarkaasna abuuray tuhun kala dhexgala madaxda dowlada dhexe, tan gobollada iyo dowladaha hoose.
Xaalada guud ee la dagaalanka Covid 19 waxba iskama badelin, halka saameyntiisu ay noqotey mid faraha ka siibaxayso, walwalka shacabkuna uu sii kordhaayo.
831 ruux ayaa shaley u geeriyoodey cudurkan, halka tirada dhimashada guud ee Maraykanka uu sii cagacagaynayo 4,085.
Deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay waxaa ka soo kordhey tirooyin horleh.
Gobolka Minnesota waxaa laga helay 629 qof, dhimashada waa 12
Gobolka Ohio 2210, dhimashada waa 55
Gobolka Washington dadka laga helay waxay gaarayaan 5482 waxana u geeriyootay 232 ruux.
Dhanka dhaqaalaha, suuqyada ganacsiga ee Mareykanka ayaa dhurbaaxo weyn kala kulmey cudurkan. dhaqaalyahanada ayaa odorosaya in aysan sookabashada qasaaraha suuqyada ganacsiga ee ka dhashey Covid 19 aan mardhow laga kaban doonin,
Tusaale ahaan Suuqa Down Jones ayaa wajahay dhaqdhaqaaqiisi ugu hooseeyey ee abid uu la kulmi rubuca ugu horeeyo ee sanadka oo hada soo xirmey.
Madaxda dowladaha hoose iyo gobollada oo dhaliilayo habdhaqanka dowlada dhexe ayaa sii kordhaya. Haweenayda gudoomiyaha ka ah Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada sadexaad ee uguweyn Mareykanka, ayaa tiri, “waxaan shaki ka qabaa kaydka dowlada dhexe ee agabka ay ugu talagashey masiibooyink”.
Lori Lightfoot oo hadlkeeda sii wadata ayaa tiri, “majiro muumul wax ka dalbadey dowlada dhexe oo jawaab waafi ah ka helay”.
Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo oo kol hore go’aansadey in ay iyagu qabtaan waxyaabo badan oo dowlada dhexe laga rabey, ka dib marki ay ka waayeen heerki ay ka rabeen, ayaa hab dhaqanka madaxweyne Donald Trump ku sheegay mid aan kii Mareykanka ahayn.
Dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee Mareykanka ayaa dadweynaha la wadaagaya, in qasaaraha nafeed ee kadhalanayo Covid 19 uu aad u badnaan doono, ka hor inta aan la xakameyn.
Waxaa diyaariyay: Deeq Darajo
Previous articleSacuudi Carabiya oo soo saartay WAR ku saabsan qorshaha Xajka ee sanadkan
Next articleAfricom’s casualty reports in Somalia welcome but long overdue-Amnesty International